Samsung ကုန်ပစ္စည်း အာမခံအချက်အလက်များ | Samsung Myanmar
အသုံးပြုသူစိတ်ချမ်းမြေ့မှုရှိစေရန် ကျွနု်ပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးတွင် ထုတ်လုပ်သူအာမခံပေးအပ်ထားပါသည်။
အာမခံအချက်များအပေါ်တွင် တောင်းဆိုစရာများရှိပါက ကျွနု်ပ်တို့အားကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပေးပါ၊ တောင်းဆိုမှုလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်အား လမ်းညွှန်ပြသပေးပါမည်။
သင့်အာမခံတွင်ပါဝင်သည့်အချက်များ၏ အကျဉ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်နှင့် သင့်ကုန်ပစ္စည်းအားမှတ်ပုံတင်မည့်လင့်ခ်များနှင့် လက်ရှိတွင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်သောကုန်ပစ္စည်းများအား အောက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သင့်အား အလျှင်မြန်ဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံးကူညီနိုင်ရန်အလို့ငှာ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအား ကျွနု်ပ်ထံတွင်မှတ်ပုံတင်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
AUDIO VISUAL ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Mobile/ tablet (Model No. "SM-" ဖြင့်စသော)
အာမခံကာလ 12 လ
(၁၂)လ အာမခံ (ပြည်တွင်း)
အာမခံကာလ6လ
(၆)လ အာမခံ (ပြည်တွင်း)
- အာမခံသက်တမ်းမှာ ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ စ၍ (၁)နှစ်ဖြစ်ပြီး အာမခံကာလအတွင်း စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခု ချို.ယွင်းပါက ပြုပြင်သော ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်း နှင့် ပြုပြင်ခကို အခမဲ့ တာဝန်ယူ ပြုပြင်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
-အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ အာမခံသက်တမ်းမှာ (၅)နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ : Motor of washing machine (top load / twin tub)
-အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ အာမခံသက်တမ်းမှာ ( ၁၁ ) နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ : Motor of washing machine (top load / Wobble ), DD motor and digital inventor motor of washing machine (front load)
- အာမခံရရှိနိုင်မှု : အထက်ပါ ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း၏ ပြင်ဆင်မှု၊ လဲလှယ်မှုများအတွက် ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း၏ အာမခံသက်တမ်းအတွင်းဖြစ်ပါက အခမဲ့ပြုပြင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အာမခံသက်တမ်း ( ၁ ) နှစ် ကျော်ခဲ့လျှင် သုံးစွဲသူမှ Gas ဖြည့်ခ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခ၊ အလုပ်သမားခ၊ ပြုပြင်သော အစိတ်အပိုင်း၏ ကျသင့်ငွေတို့ကို ပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
- (၃) စက်ပစ္စည်း၏ပြင်ပပါ အပိုပစ္စည်းများ၊ အဝေးထိန်းခလုတ်၊ လေစစ်ဇကာများ၊ ပလတ်စတစ်မျက်နှာစာအဖုံးများ၊ စက်ကိုယ်ထည် အစိတ်အပိုင်းများ ပျောက်ဆုံး၊ပျက်စီး ကွဲအက်မှုများအတွက် တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။ : ဥပမာ- broken/crack of glass, plastic parts as shelf, knob, part for replace water filter of SBS refrigerator.
- အာမခံသက်တမ်းမှာ ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ စ၍ (၁)နှစ်ဖြစ်ပြီး အာမခံကာလအတွင်း စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခု ချို.ယွင်းပါက ပြုပြင်သော ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်း နှင့် ပြုပြင်ခကို အခမဲ့ တာဝန်ယူ ပြုပြင်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
-အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ အာမခံသက်တမ်းမှာ (၅)နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ : Compressor of refrigerator
- အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ အာမခံသက်တမ်းမှာ (၁၀) နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ : Inventor compressor of refrigerator.
- အာမခံရရှိနိုင်မှု : အထက်ပါ ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း၏ ပြင်ဆင်မှု၊ လဲလှယ်မှုများအတွက် ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း၏ အာမခံသက်တမ်းအတွင်းဖြစ်ပါက အခမဲ့ပြုပြင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အာမခံသက်တမ်း ( ၁ ) နှစ် ကျော်ခဲ့လျှင် သုံးစွဲသူမှ Gas ဖြည့်ခ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခ၊ အလုပ်သမားခ၊ ပြုပြင်သော အစိတ်အပိုင်း၏ ကျသင့်ငွေတို့ကို ပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
- အာမခံသက်တမ်းမှာ ဝယ်ယူသည့်နေ့မှ စ၍ (၁)နှစ်ဖြစ်ပြီး အာမခံကာလအတွင်း စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခု ချို.ယွင်းပါက ပြုပြင်သော ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်း နှင့် ပြုပြင်ခကို အခမဲ့ တာဝန်ယူ ပြုပြင်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
-အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ အာမခံသက်တမ်းမှာ (၅)နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ : Magnetron of microwave
- အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ အာမခံသက်တမ်းမှာ (၁၀) နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ : Ceramic enamel inside of microwave oven (Aug 2013 မှစ၍)
(၁)နှစ် ပြည်တွင်းအာမခံ (compressor ၅နှစ် အစိတ်အပိုင်းအခမဲ့၊ လက်ခနှင့်ပို့ဆောင်ခကျခံရပါမည်။)
အထက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများ၏အာမခံသက်တမ်းမှာ ဝယ်ယူသည့်နေ့မှစ၍ ( ၁ ) နှစ် ဖြစ်ပါသည်။
အာမခံကာလအတွင်း ပြုပြင်သောစက်ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းနှုင့် ပြုပြင်ခကို အခမဲ့တာဝန်ယူပြုပြင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ အပိုပစ္စည်းများသည် အာမခံခြင်းတွင် မပါဝင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
Plastic front panel, Cabinets, Antennae, Cables, Plastic Parts and front cover.
Politique de garantie Click To Expand
အောက်ပါ အကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော စက်ပစ္စည်းချို့ယွင်းမှုများသည် အာမခံခြင်းတွင် မပါဝင်ပါ။ (အဝတ်လျှော်စက်၊ ရေခဲသေတ္တာနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်မီးဖို)
- အဝတ်လျှော်စက် tub, Inlet filter, filterအိတ် များကို နည်းလမ်းမမှန်စွာ ဆေးကြောခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော စက်ချို.ယွင်းမှုများ။
- အဝတ်လျှော်စက်ထဲသို့ စက်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော ပစ္စည်းများ မတော်တဆထည့်မိ၍ အဝတ်လျှော်မိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စက်ချို့ယွင်းမှုများ။
- အဝတ်လျှော်စက်နှင့် Microwave oven များကို စက်၏ ခံနိုင်ရည် စွမ်းအားထက်ပိုမိုသုံးစွဲခြင်း၊ (ဥပမာ- စီးပွားဖြစ် အသုံးပြုခြင်း) စသည့်ပျက်စီးခြင်းတို့အား အာမခံကာလအတွင်း ဖြစ်သော်လည်း ပစ္စည်းတန်ဖိုးနှင့် ပြုပြင်ခ ကျသင့်ငွေကို ဝယ်သူမှ ပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အာမခံတွင် ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာများမပါဝင်ပါ။ (လေအေးပေးစက်)
၁။ အာမခံကာလ(၁)နှစ်ကျော်လွန်ပြီးနောက် Compressorပြင်ဆင်မှုများအတွက် လက်ခနှင့် ပို့ဆောင်ခအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု။
၂။ ဂတ်စ်ပြန်ဖြည့်ခြင်း၊ ဓာတုပစ္စည်းသန့်စင်ခြင်း၊ အထွေထွေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ဇကာလဲလှယ်ခြင်း။
၃။ ပလတ်စတစ်(သို့)မှန်တွယ်ဆက်မှုများ၊ ပိုက်ခေါင်း၊ လေစစ်ဇကာ၊ ပိုက်စသည့်အချိတ်အဆက်များ။
၄။ တစ်ပါတည်းပါဝင်သော ဇကာ၊ လဲတပ်နို်င်သောပိုက်ခေါင်း၊ ထပ်ဆက်ရန် ပိုက်များနှင့် လက်ကိုင်၊ ခလုပ်၊ ကြိုးစသည့် ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများ
ယခုအာမခံမှာ Samsung ထုတ်ကုန်များအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ အထူးအာမခံ ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသည့် ကိစ္စရပ်များမှအပ အပိုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီ၊ မီးသီးစသည့် လဲလှယ်အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများမှာ အာမခံတွင် အကျုံးဝင်ခြင်းမရှိပါ။
ယခုအာမခံသည် အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးမှု၊ မတော်တဆမှု၊ မှားယွင်းအသုံးပြုမှု၊ လွဲမှားစွာအသုံးပြုမှု၊ ဥပေက္ခာပြုမှု၊ ကြမ်းတမ်းစွာကိုင်တွယ်မှု သို့မဟုတ် လွဲမှားစွာအသုံးပြုမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးချို့ယွင်းမှုတို့အတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။ Samsung မှ အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိသော ပြုပြင်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ပစ္စည်းအား ပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်လိုက်ပါကလည်း အာမခံပျက်ယွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များအတွက်လည်း အာမခံမရရှိနိုင်ပါ။
- အာမခံကဒ်ပြားအား ပြောင်းလဲထားခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ပျက်ယွင်းနေခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ဖျက်ထားခြင်း၊
- အချက်အလက်ပြည့်စုံသော ဝယ်ယူခဲ့သည့် မူရင်းအထောက်အထားမတင်ပြနိုင်ခြင်း။ (အချက်အလက်များအနေဖြင့် ရောင်းချလိုက်သည့်ဆိုင်၏ အမည်နှင့် လိပ်စာ၊ ဝယ်ယူခဲ့သည့် နေ့ရက်နှင့် နေရာ၊ ပစ္စည်းမော်ဒယ်နံပါတ်နှင့် Serial နံပါတ်၊ IMEI နံပါတ်တို့ ပါဝင်ရပါမည်။)
- အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိသော အရောင်းဆိုင်များနှင့် (နိုင်ငံတကာ အာမခံပေးထားသည့် ထုတ်ကုန်များမဟုတ်ဘဲ) ပြည်ပမှဝယ်ယူလာသော ပစ္စည်းများ၊
- အလှဆင်အစိတ်အပိုင်းများပျက်စီးခြင်း (ဘော်ဒီချိုင့်ဝင်ခြင်း၊ အက်ကြောင်းထင်ခြင်း၊ ခြစ်မိခြင်း စသည့်)
- အစားအစာနှင့် သောက်စရာများ ဖိတ်ကျခြင်း
- မကိုက်ညီသော၊ မတည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ဗို့အားဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်း၊
- ဓါတုဓါတ်ပြုခြင်း၊ သံချေးတက်ခြင်းနှင့် စွန်းထင်းခြင်း၊
- မသင့်လျော်သော စမ်းသပ်မှု၊ မောင်းနှင်အသုံးပြုမှု၊ သရုပ်ပြသမှု၊ ထိန်းသိမ်းမှု၊ တပ်ဆင်မှု၊ ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်မှု သို့မဟုတ် မြှင့်တင်မှုအမျိုးမျိုး၊
- အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (သို့)အစိတ်အပို်င်းများအား Samsungမှ ထုတ်လုပ်ထားခြင်း (သို့) အသိအမှတ်ပြုထားခြင်း မရှိသည့် ပစ္စည်းများနှင့် လဲလှယ်တပ်ဆင်ထားခြင်း၊
- Samsung အသိအမှတ်ပြုနည်းပညာရှင် မဟုတ်သူများမှ ပြုပြင်ခြင်း (သို့) ပြုပြင်ရန်ကြိုးစားခြင်းများ၊
- ပစ္စည်း၏ Serial နံပါတ်အားဖယ်ရှားထားခြင်း သို့မဟုတ် အကျုံးမဝင်စေနိုင် (သို့) ပျက်ယွင်းစေနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း
- အဓိကကျသော ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ (သို့) ဆော့ဖ်ဝဲအား Samsung မှ ထုတ်လုပ်၊ အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းမရှိသည်တို့ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် ပျက်စီး၊ ချို့ယွင်းခြင်း၊
- ထုတ်ကုန်နှင့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အသုံးပြုသူလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ထိန်းသိမ်းမှု၊ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရမည့် ကိစ္စရပ်များအား မပြုလုပ်ခြင်း (ခေါင်းများ၊ အတွင်းပိုင်းအခေါင်းပေါက်များ၊ အသုံးပြုသူ အလွယ်တကူလဲလှယ်သန့်စင်နိုင်သည့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ)
- ပိုးမွှားနှင့် တိရိစ္ဆာန်များး၏ ဖျက်ဆီးမှု၊
- မပြည့်စုံသော (သို့) မသင့်လျော်သော တင်ဆပ်မှု၊
- ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်သည့် အသုံးပြုမှုများ၊
- ပျက်စီး၊ ယိုယွင်းနေသော ဘက်ထရီများ (သို့) Samsung မှထုတ်လုပ်ထားခြင်းမဟုတ်သည့် ဘက်ထရီများအား အသုံးပြုမှု၊
- Samsung သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရာတွင် မသင့်လျော်သော ထုတ်ပိုးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ပျက်စီးမှုများ၊
- ရေလွှမ်းမိုးခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ လေမုန်တိုင်းကျခြင်း၊ ငလျပ်လှုပ်ခြင်းနှင့် မိုးကြိုးပစ်ခြင်း စသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သောပျက်စီးမှုများ၊
- ပြင်ပပစ္စည်းများကြောင့် ပျက်စီးမှုများ၊
- ရေငွေ့ရိုက်ခြင်း၊ စိုစွတ်ခြင်းနှင့် လွန်ကဲသော အပူအအေး အခြေအနေများကြောင့် ပျက်စီးမှု၊
မတူညီသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများတွင် ကွဲပြားသော အချက်အလက်များ၊ အသုံးပြုမှုများ၊ ရုပ်ထွက်ပြသမှုများ၊ အသွင်အပြင်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်နေမှာဖြစ်သည့်အတွက် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း၏ ချို့ယွင်းမှုဟု မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။
ပြုပြင်ရန်အတွက် SAMSUNG သို့ မအပ်နှံမှီတွင် မိမိဖုန်းထဲရှိ Data အချက်အလက်များကို ကြိုတင်သိမ်းဆည်းမှု (Back Up) ပြုလုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ ဖုန်းထဲမှ ဆော့ဖ်ဝဲများ၊ ဒေတာများနှင့် သိမ်းဆည်းထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် SAMSUNG မှ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း အကယ်၍ ပြုပြင်လိုက်ခြင်းကြောင့် ဖုန်းတွင် သိမ်းဆည်းပါဝင်သော အချက်အလက်နှင့် ဒေတာများ ပြောင်းလဲ၊ပျက်စီးမှုတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက SAMSUNG တွင်တာဝန်မရှိဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
ဤအာမခံတွင် ပုံမှန် ထုတ်ကုန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၊ သရုပ်ပြသမှု၊ တပ်ဆင်မှု၊ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှု၊ တွက်ချက်တိုင်းတာမှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲမှုတို့ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
အာမခံကာလအတွင်းတွင် မည်သည့်အစိတ်အပိုင်း၊ ကိရိယာမဆိုထိခိုက်ပျက်စီးပါက SAMSUNG ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အပြည့်အဝတာဝန်ယူ၍ ပြုပြင်လဲလှယ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
မှန်ကန်သော အစီအစဉ်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်အား လေ့လာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အထူးအားဖြင့် ထုတ်ကုန်နှင့်အတူထည့်သွင်းပေးထားမည့် ထိခိုက်မှု စစ်ဆေးဖော်ထုတ်နည်းလမ်းညွှန် (Troubleshooting Guide) ကို လေ့လာအသုံးပြုပေးစေလိုပါသည်။
ပြုပြင်ရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအကူအညီများလိုအပ်ပါက SAMSUNG Myanmar Call Center နံပါတ် 01-2399888 သို့ ခေါ်ဆိုအကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။ SAMSUNG အသိအမှတ်ပြု ပြုပြင်ရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာများသို့လည်း ပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ဆက်သွယ်ပို့ဆောင်ပြုပြင်ရာတွင် SAMSUNG မိုဘိုင်းပစ္စည်း၏ Model နံပါတ်၊ Serial နံပါတ်၊ IMEI နံပါတ်၊ ဝယ်ယူခဲ့သည့်နေ့ရက်နှင့် အထောက်အထားစာရွက်နှင့် ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကို ပြောကြားပေးအပ်ရန်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်း၏ SAMSUNG ပစ္စည်းမှာ အာမခံကာလကျော်လွန်နေပါကလည်း SAMSUNG အသိအမှတ်ပြု ပြုပြင်ရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာသို့သာ ပို့ဆောင်၍ သက်ဆိုင်ရာ ကျသင့်ငွေပေးချေပြီး ပြုပြင်သင့်ပါသည်။
အကယ်၍ ရောင်းချပေးသည့်ကုန်သည်မှ သီးသန့်ထပ်ဆောင်းပေးထားသော အာမခံဝန်ဆောင်မှုကာလဖြင့် အကျုံးဝင်နေသေးပါက ထိုသို့ ရောင်းချလိုက်သည့်ကုန်သည်သို့ ဆက်သွယ်အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။ (ပုံမှန်အားဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည့်ဆိုင်နှင့် တူညီသည့်အတွက် ဆိုင်သို့ပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။)
SAMSUNG အား ဖုန်းကိုပြုပြင်ရာတွင် လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးမှုနှင့် ချို့ယွင်းမှုလက္ခဏာရှာဖွေခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်း၏ချို့ယွင်းမှုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် SAMSUNG ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာအတည်ဖြစ်ပါသည်။
အစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းအစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းများအတွက် SAMSUNG ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်သင့်လျော်သော တန်ဖိုးရှိသည့် အသစ်(သို့) ပြင်ဆင်ထားသောပစ္စည်းဖြင့် ပြုပြင်တပ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
ပစ္စည်းအသစ်ဖြင့်လဲလှယ်ပေးသော ကိစ္စရပ်များတွင် မူလပစ္စည်းနှင့် လဲလှယ်လိုက်သော ပစ္စည်းတန်ဖိုးကွာဟနေပါက SAMSUNG မှ ပြန်အမ်းငွေပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ လဲလှယ်ရမည့်ပစ္စည်း၏ စျေးနှုန်းမှာ ကွာခြားမှုရှိနေပါက လက်ရှိပေါက်စျေးမှာအတိုင်းကျသင့်မှာဖြစ်ပါသည်။ လဲလှယ်လိုက်ရသော အစိတ်အပိုင်းနှင့် ပစ္စည်းများမှာ SAMSUNG ပိုင်ပစ္စည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သွားရောက်ရန်အလွန်ခက်ခဲသော နေရာများ (သို့) ပြုပြင်ရေးဝန်ထမ်းများသွားရောက်ရန်အတွက် အန္တရာယ်များသောနေရာဒေသများတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုထားသော ပစ္စည်းများအားပြုပြင်ရန်အတွက် SAMSUNG မှငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အခြားသောနေရာဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်အားခကျသင့်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
SAMSUNG သို့ ပြုပြင်ရန်မပို့ဆောင်မှီတွင် ပြုပြင်ရေးအတွက်မလိုအပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ၊ ရွေးချယ်မှုများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုထားသည်များကို ဖယ်ရှားပေးလိုက်ရပါမည်။ အကယ်၍ ထိုသို့မဖယ်ရှားခဲ့သောကြောင့် ၄င်း အစိတ်အပိုင်းများ၊ ရွေးချယ်မှုများ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုထားသည်များ ပျက်စီး၊ပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါက SAMSUNG တွင်တာဝန်မရှိဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
SAMSUNG သို့ပို့ဆောင်ခြင်း (သို့) SAMSUNG မှပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် ကျသင့်သည့်ပို့ဆောင်ခ၊ အာမခံကြေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်တို့ကို သုံးစွဲသူဖက်မှကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ (လိုင်းဆွဲအား မကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ လိုင်းမမိခြင်းနှင့် ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးမကောင်းမွန်ခြင်းတို့အပါအဝင်) ပြုပြင်ရမည့်အကြောင်းအရာသည် အာမခံတွင်အကျုံးမဝင်ဟု SAMSUNG မှ ဆုံးဖြတ်ပါက ဦးစွာအသိပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အာမခံတွင် အကျုံးဝင်ခြင်းမရှိသည့် ပြုပြင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကို ရယူလိုပါက အသုံးပြုရမည့်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ပို့ဆောင်စရိတ်နှင့် ပြုပြင်ရန်၊ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် ကုန်ကျမည့် လုပ်အားခတို့ကို သုံးစွဲသူဖက်မှကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တာဝန်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ကန့်သတ်ချက်များ
ဥပဒေမှအများဆုံးခွင့်ပြုထားသော အတိုင်းအတာအရနှင့် ယခုအာမခံတွင်ကြိုတင်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းများမှလွဲ၍ SAMSUNG အနေဖြင့် ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အခြေအနေ၊ ဖော်ပြမှု (သို့)အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်မှု၊ ပြဌာန်းထားမှုဖြစ်စေ၊ ပါဝင်သော်လည်း မကန့်သတ်ထားသည့် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ၊ ၄င်း၏ ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုမှုအတွက် ကိုက်ညီမှု၊ ဒီဇိုင်း၊ အခြေအနေ၊
အရည်အသွေး (သို့) ထုတ်ကုန်၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ (သို့) ထုတ်ကုန်၏ (သို့) ပါဝင်အစိတ်အပိုင်း၏ လက်ရာတို့အတွက် မည်သည့်အာမခံ (သို့) ကိုယ်စားပြုမှုမှ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်ချက် (User Manual) ထဲတွင်ပါဝင်သော မည်သည့်အချက်အလက်ကမျှ ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် အာမခံအချက်အလက်များအဖြစ် ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဝယ်ယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း(သို့) လွဲမှားစွာအသုံးပြုခြင်း၊ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ကို အသုံးပြုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း၊ အသုံးပြုမှုမှပျောက်ဆုံးခြင်းတို့မှ တိုက်ရိုက်၊သွယ်ဝိုက်နည်းဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးခြင်းများ၊ အဖြစ်အပျက်တစ်စုံတစ်ရာ၊ ထူးခြားဖြစ်စဉ်၊ လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတို့ကြောင့် အထူးအာမခံပျက်ယွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အလားတူပျက်စီးခြင်းများ၊ မမျှော်လင့်ထားသော ခံစားခွင့်နှင့် အကျိုးအမြတ်များဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဂရုစိုက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းအပါအဝင် တရားသဖြင့်မဟုတ်သောကိစ္စရပ်များ၊ SAMSUNG ၏ အေးဂျင့်များ (သို့) ဝန်ထမ်းများမှ ပြုလုပ်သောမှားယွင်းမှုများ၊ သို့မဟုတ် စာချုပ်ပျက်ယွင်းမှုအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ သင့်ထံတွင်တောင်းဆိုသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက်သော်လည်းကောင်း SAMSUNGတွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ဤကန့်သတ်ထားသော အာမခံသည် မူလဝယ်ယူသူမှအပ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ဘဲ သင်တစ်ဦးတည်းအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ အာမခံသည် (သို့) အာမခံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်ခြင်း သို့ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပေါ်လာပါက ကျန်ရှိသည့်အာမခံအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ဘဲ သင်သိရှိထားသည့်အာမခံအတိုင်း (သို့) ဥပဒေမှခွင့်ပြုထားသည့်ကန့်သတ်ချက်များအတိုင်းသာဖြစ်ပါသည်။
ဤအာမခံသည့် ပြဌာန်းထားသောသုံးစွဲသူအခွင့်အရေးများအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုတစ်စုံတစ်ရာ ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အာမခံမှာ သင်ရရှိရမည့် ပြဌာန်းအခွင့်အရေးများအား (ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းလုံးဝမရှိစေဘဲ) ထပ်မံပေါင်းထည့်ပေးထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ အချို့တရားစီရင်ခြင်းများတွင် အဖြစ်အပျက်များကိုချန်လှပ်ခြင်း (သို့) ကန့်သတ်ခြင်း၊ လက်ငင်းသက်ရောက်သော ပျက်စီးမှုများ (သို့) ပြဌာန်းချက်များအား ချန်လှပ်ခြင်း (သို့) ခန့်မှန်းယူဆထားသော အခြေအနေများ(သို့) အာမခံများကို ခွင့်ပြုခြင်းမပြုသောကြောင့် ၄င်းကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပယ်ဖျက်ခြင်းများ သင့်ထံတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ဝယ်ယူသော ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သော အာမခံ
မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားဝင်တိုက်ရိုက်တင်သွင်းထားခြင်း မရှိသော ထုတ်ကုန်စ္စည်း (ပြည်ပနိုင်ငံများမှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူအသုံးပြုသော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း) များကိုလည်း Samsung Authorized Service Center များတွင် Oversea Model ပြုပြင်ခ ထပ်ဆောင်းပေးဆောင်၍ ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအတိုင်း ပြည်ပမှတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူသောထုတ်ကုန်များကိုပြုပြင်နိုင်သည်။
ပြည်ပမှတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူသောထုတ်ကုန်များ ပြုပြင်ပါက ပြည်ပထုတ်ကုန်မူဝါဒ အရ ပြုပြင်ခနှင့် အပိုကြေး ထပ်မံပေးဆောင်ရမည့်အပြင် ပြုပြင်မှုမှာလည်း ပုံမှန်ထက်အချိန်ပိုမိုကြာမြှင့်နိုင်ပါမည်။
- ခန့်မှန်း ပြုပြင်စရိတ်နှင့် ပြုပြင်ရန်ကြာမြှင့်ချိန်ကို Samsung Authorized Service Center များတွင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ပြန်လည်ပြုပြင်၍ရနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ ထပ်မံစစ်ဆေးရမည်။
- အိမ်သုံးအီလက်ထရောနစ် ထုတ်ကုန်များအတွက် လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ (တီဗွီဖန်သားပြင်များ၊ ရေခဲသေတ္တာတံခါးများ) အစရှိသည် (သို့) အခြားလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများ မှာယူရန်ခက်ခဲခြင်း (ဥပမာ- ထုတ်လုပ်မှုသက်တမ်းကြာမြှင့်နေသော ထုတ်ကုန်များ)
- မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိ​ရောင်းချ​နေခြင်းမရှိသည့် အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များ ပြုပြင်၍မရနိုင်ပါ၊
- အကယ်၍ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ ခြားနားမှုရှိပါက ပြုပြင်၍မရနိုင်ပါ၊
- ဝန်ဆောင်မှုနေရာဒေသ ခြားနားမှုအပေါ် မူတည်၍ ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲခြင်း (ဥပမာ- bandwith, voltage အစရှိသည်များ)
☏ : 01-2399 888 သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍ Pre Booking လုပ်ရန်
Samsung ကုန်ပစ္စည်း အာမခံအချက်အလက်များ Samsung ကုန်ပစ္စည်း အာမခံအချက်အလက်များ
Product & Service အဖွင့်